Academic Writing အကြောင်း သိကောင်းစရာ - For her Myanmar
Academic Writing အကြောင်း သိကောင်းစရာ
အင်္ဂလိပ်စာရေးနည်းအမျိုးမျိုးထဲကမှ Academic Writing ဆိုတာ ဦးနှောက်အစားဆုံး နဲ့ အန္တရာယ်အများဆုံးရေးနည်းဆိုတော့ကာ….
ယောင်းတို့ရေ.. ဒီနေ့အတွက်တော့ ယောင်းတို့အတွက် လုပ်ခန်းခွင်အတွက်ရော ပညာရေးအတွက်ပါ တော်တော်လေးအသုံးဝင်တဲ့ စာရေးနည်းလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်တယ်။ အဲဒါကတော့ Academic Writing တဲ့။ ဘာသာပြန်ရရင်တော့ အဆင့်မီ အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားပေါ့။ ယောင်းတို့ မြင်တွေ့နေကျဖြစ်တဲ့ ဝတ္ထုတွေ၊ ကဗျာတွေ၊ သတင်းစာတွေ၊ ကြော်ငြာ အရေးအသားတွေနဲ့တော့ မတူဘူးပေါ့နော်။ Academic Writing ကို မဟာဘွဲ့အတွက် ပြုစုရတဲ့ စာတမ်းကြီးတွေ၊ လုပ်ငန်းသဘောအရ ရေးရတဲ့ Proposal တွေ၊ သုတေသနစာတမ်းတွေအတွက် သုံးကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပညာရေးပိုင်းမှာပေါ့။
Academic writing က ဘာလို့ခေါင်းစားရတာလဲဆိုရင် ဟိုက်ဖန်လေး၊ ဒက်ခ်ျလေး၊ ကော်မာလေး၊ ဆီမီကော်လုံ အသုံးလေးက အစသတိထားရတယ်။ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းရွေးချယ်မှုကလည်း ပညာရှင်ဆန်ရတယ်။ ပြောရရင်တော့ နေ့စဉ်သုံးစကားလုံးတွေသုံးလို့ မသင့်တော်တာပေါ့။ မြင်အောင် ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင် တည်ထောင်သည် ဆိုတဲ့အသုံးမှာ Build ကိုသုံးမယ့်အစား establish ဆိုတဲ့စကားလုံးကို သုံးလိုက်တာမျိုး၊ ငြင်းပယ်သည်ဆိုတဲ့နေရာမှာ refuse ကို သုံးမယ့်အစား decline ဆိုတဲ့စကားလုံးကို သုံးလိုက်ရတာမျိုးတွေပေါ့။ အဓိပ္ပါယ်ကအတူတူပဲ။ အသုံးအနှုန်းပဲကွာသွားတာပေါ့။
Related article >>> အင်္ဂလိပ်လို Presentation လုပ်ကြတဲ့အခါ ဘယ်လို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမလဲ?
နောက်တစ်ခုက သတိထားရမှာက Academic writing မှာ phrasal Verb လို့ခေါ်တဲ့ verb+preposition အတွဲကို မသုံးမိစေဖို့ပါ။ ဥပမာ Put of the fire အစား extinguish the fire လို့သုံးတာ ပို academic ဆန်တဲ့ သဘောပေါ့။ နောက်ပြီး အတိုကောက်စကားလုံးတွေ – don’t, can’t, I’m, you’re အစရှိသဖြင့် အတိုချုပ်ထားတဲ့ စကားလုံးတွေ သုံးဖို့မသင့်ပါဘူး။ ဆိုတော့ အဲဒါတွေအစား do not, cannot, I am, you are တို့လိုမျိုးပဲ သုံးပေးဖို့ အားပေးပါတယ်။
slang လို့ခေါ်တဲ့ ခေတ်ပေါ်အသုံးတွေကိုကတော့ လုံးဝရှောင်နိုင်လေကောင်းလေပါပဲ။ Academic paper တစ်စောင်မှာ အဲဒီလိုစကားလုံးမျိုးတွေ တွေ့ရတာ အင်မတန်မှ အကျည်းတန်ပါတယ်။ စာဖတ်သူ၊ စာစစ်သူအပေါ်မှာ အလေးမထားဘူးဆိုတဲ့အထိ ကောက်ချက်ဆွဲလို့ရနိုင်တဲ့အထိ သတိထားရမယ့် အသုံးအနှုန်းပါ။ သုံးချင်သပဆိုရင်တော့ Idiom ကို သုံးပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချို့ Idiom အသုံးတွေကလည်း informal ဖြစ်နေဆဲမို့ ကိုယ့်စကားလုံးရွေးချယ်မှုအပေါ်တော့ သတိထားဖို့လိုလိမ့်မယ်နော့်။
နောက်ဆုံးနဲ့ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ plagiarism လို့ခေါ်တဲ့ မူပိုင်ခွင့်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ ကူးချတာပေါ့။ Plagiarism ဟာ academic field မှာတော့ ပြစ်မှုလို့တောင်ပြောရလောက်အောင်ထိ ပြင်းထန်ပါတယ်။ ပညာရေးနယ်ပယ်မှာ plagiarize လုပ်တဲ့သူကို ကျောင်းကနားခိုင်းတာ၊ ကျောင်းထုတ်တာ၊ ကျောင်းတက်ခွင့်လုံးဝမပေးတော့တာ၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စာတမ်းတွေနဲ့ ငြိလာတဲ့အခါ တရားစွဲဆိုတာ၊ ထောင်ဒဏ်၊ ငွေဒဏ်ချမှတ်တာအထိ ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူနိုင်ပါတယ်။
Reference ပေးတဲ့နေရာမှာလည်း သူ့စည်းသူ့ကမ်းနဲ့လာပါတယ်။ Facebook မှာလို တစ်နေရာကယူပြီး credit လို့တပ်လိုက်တာနဲ့ မပြီးသွားပါဘူး။ စာအုပ်နာမည်၊ ရေးသူ၊ ခုနှစ်၊ ထုတ်ဝေသူ၊ စာအုပ်တိုက်၊ စာမျက်နှာဘယ်လောက်၊ ဘယ်နှစ်ကြောင်းမြောက် စသည်ဖြင့် စည်းမျဉ်းအတိုင်းအစဉ်လိုက်ရေးရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Space bar လေးတစ်ချက်၊ coma လေးတစ်ချက်၊ capital letter, small letter, စာရေးသူ နာမည်ရေးနည်း၊ full stop လေးတစ်ခုမှ အမှားမခံပါဘူး၊ တော်တေ်ာလေးကို ကြပ်မတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းပါ။ reference အပေးမှားရင်လည်း တော်တော်ရှင်းရမယ့်သဘောမှာ ရှိတာမို့ သေချာလေး သတိထားနိုင်မှတော်ကာကျမယ်နော်။
Related article >>> အင်္ဂလိပ်လိုကျွမ်းကျင်ဖို့ စကားပြောသင်တန်းတွေ ဈေးကြီးပေး တက်ဖို့လိုသလား
ကဲ… Academic Writing အကြောင်းကို သိသင့်သလောက်တော့ ခြုံငုံပြီး ဝေမျှပေးလိုက်ပါပြီနော်။ Academic Writing က မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းလေးတွေကို နှံ့နှံ့စပ်စပ်သိထားရင် ရေးတဲ့အခါ အခက်အခဲတွေ တော်တော်လျော့သွားနိုင်ပါတယ်။ ယောင်းတို့လည်း သိထားတာတွေရှိရင် ဝေမျှခဲ့ပါဦး။
အင်ျဂလိပျစာရေးနညျးအမြိုးမြိုးထဲကမှ Academic Writing ဆိုတာ ဦးနှောကျအစားဆုံး နဲ့ အန်တရာယျအမြားဆုံးရေးနညျးဆိုတော့ကာ….
ယောငျးတို့ရေ.. ဒီနအေ့တှကျတော့ ယောငျးတို့အတှကျ လုပျခနျးခှငျအတှကျရော ပညာရေးအတှကျပါ တျောတျောလေးအသုံးဝငျတဲ့ စာရေးနညျးလေးတဈခုနဲ့ မိတျဆကျပေးခငျြတယျ။ အဲဒါကတော့ Academic Writing တဲ့။ ဘာသာပွနျရရငျတော့ အဆငျ့မီ အင်ျဂလိပျစာအရေးအသားပေါ့။ ယောငျးတို့ မွငျတှနေ့ကေဖြွဈတဲ့ ဝတ်ထုတှေ၊ ကဗြာတှေ၊ သတငျးစာတှေ၊ ကွျောငွာ အရေးအသားတှနေဲ့တော့ မတူဘူးပေါ့နျော။ Academic Writing ကို မဟာဘှဲ့အတှကျ ပွုစုရတဲ့ စာတမျးကွီးတှေ၊ လုပျငနျးသဘောအရ ရေးရတဲ့ Proposal တှေ၊ သုတသေနစာတမျးတှအေတှကျ သုံးကွပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ပညာရေးပိုငျးမှာပေါ့။
Academic writing က ဘာလို့ခေါငျးစားရတာလဲဆိုရငျ ဟိုကျဖနျလေး၊ ဒကျချြလေး၊ ကျောမာလေး၊ ဆီမီကျောလုံ အသုံးလေးက အစသတိထားရတယျ။ စကားလုံးအသုံးအနှုနျးရှေးခယျြမှုကလညျး ပညာရှငျဆနျရတယျ။ ပွောရရငျတော့ နစေ့ဉျသုံးစကားလုံးတှသေုံးလို့ မသငျ့တျောတာပေါ့။ မွငျအောငျ ဥပမာပေးရမယျဆိုရငျ တညျထောငျသညျ ဆိုတဲ့အသုံးမှာ Build ကိုသုံးမယျ့အစား establish ဆိုတဲ့စကားလုံးကို သုံးလိုကျတာမြိုး၊ ငွငျးပယျသညျဆိုတဲ့နရောမှာ refuse ကို သုံးမယျ့အစား decline ဆိုတဲ့စကားလုံးကို သုံးလိုကျရတာမြိုးတှပေေါ့။ အဓိပ်ပါယျကအတူတူပဲ။ အသုံးအနှုနျးပဲကှာသှားတာပေါ့။
Related article >>> အင်ျဂလိပျလို Presentation လုပျကွတဲ့အခါ ဘယျလို ကွိုတငျပွငျဆငျရမလဲ?
နောကျတဈခုက သတိထားရမှာက Academic writing မှာ phrasal Verb လို့ချေါတဲ့ verb+preposition အတှဲကို မသုံးမိစဖေို့ပါ။ ဥပမာ Put of the fire အစား extinguish the fire လို့သုံးတာ ပို academic ဆနျတဲ့ သဘောပေါ့။ နောကျပွီး အတိုကောကျစကားလုံးတှေ – don’t, can’t, I’m, you’re အစရှိသဖွငျ့ အတိုခြုပျထားတဲ့ စကားလုံးတှေ သုံးဖို့မသငျ့ပါဘူး။ ဆိုတော့ အဲဒါတှအေစား do not, cannot, I am, you are တို့လိုမြိုးပဲ သုံးပေးဖို့ အားပေးပါတယျ။
slang လို့ချေါတဲ့ ခတျေပျေါအသုံးတှကေိုကတော့ လုံးဝရှောငျနိုငျလကေောငျးလပေါပဲ။ Academic paper တဈစောငျမှာ အဲဒီလိုစကားလုံးမြိုးတှေ တှရေ့တာ အငျမတနျမှ အကညျြးတနျပါတယျ။ စာဖတျသူ၊ စာစဈသူအပျေါမှာ အလေးမထားဘူးဆိုတဲ့အထိ ကောကျခကျြဆှဲလို့ရနိုငျတဲ့အထိ သတိထားရမယျ့ အသုံးအနှုနျးပါ။ သုံးခငျြသပဆိုရငျတော့ Idiom ကို သုံးပေးလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အခြို့ Idiom အသုံးတှကေလညျး informal ဖွဈနဆေဲမို့ ကိုယျ့စကားလုံးရှေးခယျြမှုအပျေါတော့ သတိထားဖို့လိုလိမျ့မယျနေျာ့။
နောကျဆုံးနဲ့ အရေးအကွီးဆုံးကတော့ plagiarism လို့ချေါတဲ့ မူပိုငျခှငျ့အလှဲသုံးစားလုပျခွငျးပါတယျ။ ရှငျးရှငျးပွောရရငျတော့ ကူးခတြာပေါ့။ Plagiarism ဟာ academic field မှာတော့ ပွဈမှုလို့တောငျပွောရလောကျအောငျထိ ပွငျးထနျပါတယျ။ ပညာရေးနယျပယျမှာ plagiarize လုပျတဲ့သူကို ကြောငျးကနားခိုငျးတာ၊ ကြောငျးထုတျတာ၊ ကြောငျးတကျခှငျ့လုံးဝမပေးတော့တာ၊ နိုငျငံရေးနဲ့ ပတျသတျတဲ့ စာတမျးတှနေဲ့ ငွိလာတဲ့အခါ တရားစှဲဆိုတာ၊ ထောငျဒဏျ၊ ငှဒေဏျခမြှတျတာအထိ ပွငျးပွငျးထနျထနျအရေးယူနိုငျပါတယျ။
Reference ပေးတဲ့နရောမှာလညျး သူ့စညျးသူ့ကမျးနဲ့လာပါတယျ။ Facebook မှာလို တဈနရောကယူပွီး credit လို့တပျလိုကျတာနဲ့ မပွီးသှားပါဘူး။ စာအုပျနာမညျ၊ ရေးသူ၊ ခုနှဈ၊ ထုတျဝသေူ၊ စာအုပျတိုကျ၊ စာမကျြနှာဘယျလောကျ၊ ဘယျနှဈကွောငျးမွောကျ စသညျဖွငျ့ စညျးမဉျြးအတိုငျးအစဉျလိုကျရေးရပါတယျ။ ဒီနရောမှာ Space bar လေးတဈခကျြ၊ coma လေးတဈခကျြ၊ capital letter, small letter, စာရေးသူ နာမညျရေးနညျး၊ full stop လေးတဈခုမှ အမှားမခံပါဘူး၊ တျောတျောလေးကို ကွပျမတျထားတဲ့ စညျးမဉျြးပါ။ reference အပေးမှားရငျလညျး တျောတျောရှငျးရမယျ့သဘောမှာ ရှိတာမို့ သခြောလေး သတိထားနိုငျမှတျောကာကမြယျနျော။
Related article >>> အင်ျဂလိပျလိုကြှမျးကငျြဖို့ စကားပွောသငျတနျးတှေ ဈေးကွီးပေး တကျဖို့လိုသလား
ကဲ… Academic Writing အကွောငျးကို သိသငျ့သလောကျတော့ ခွုံငုံပွီး ဝမြှေပေးလိုကျပါပွီနျော။ Academic Writing က မလှယျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ စညျးမဉျြး စညျးကမျးလေးတှကေို နှံ့နှံ့စပျစပျသိထားရငျ ရေးတဲ့အခါ အခကျအခဲတှေ တျောတျောလြော့သှားနိုငျပါတယျ။ ယောငျးတို့လညျး သိထားတာတှရှေိရငျ ဝမြှေခဲ့ပါဦး။
Tags: Academic Writing, English, language
အစားတစ်လိုင်းယောင်းတို့အတွက် နိုင်ငံတကာက ကမ္ဘာ​ကျော်​ည​ဈေးကြီးများ
ကလေးကို လူကုန်ကူးနေပါတယ်ဆိုပြီး မှားယွင်းစွပ်စွဲမိခဲ့တဲ့ လင်ဆေးလိုဟန်
Myat Moe September 29, 2018
(၆)လအတွင်း IELTS စာမေးပွဲအတွက် ဘာတွေဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ ?
အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်လာအောင် လေ့လာနိုင်မယ့် YouTube Channel (၅) ခု
IELTS အမှတ်ပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်တွေ ရနိုင်သလဲ ?
Stella April 27, 2019
သိပ္ပံနည်းကျကျ ယောင်းအပေါ်အချစ်တွေ ပြိုဆင်းလာအောင်လုပ်နိုင်မယ့်အချက်(၆)ချက်
Phyu Thant April 12, 2019
Myat Moe March 29, 2019
Academic Writing အတွက် မဖြစ်မနေ သိထားဖို့လိုတဲ့ အချက် (၅)ချက်
Myat Moe March 22, 2019